Most Viewed - Myanmar Asian TV
When My Love Blooms ( 2020 )
#unicode WHEN MY LOVE BLOOMS Stay home ရင်း ပျင်းနေကြမဲ့ drama ချစ်သူတို့အတွက် melodrama အသစ်လေးတစ်ကားထပ်လာပါပြီနော် … ဒီ drama လေးကို TvN ရုပ်သံလိုင်းက ထုတ်လွှင့်တာဖြစ်ပြီး အပတ်စဉ် စနေ ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ ည ၉ နာရီ (မြန်မာအချိန် ၆ခွဲ) မှာ…
#unicode 2018 Feb မှာ ထွက်ရှိထားတဲ့ Korea Movie အသစ်လေး တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ရှေ့နှစ်ပိုုင်းတွေမှာ Detective K : Secret of Virtuous Widow ( 2011 ) နဲ့ Detective K : Secret of the Lost…
#unicode ပရိတ်သတ်ကြီးကိုဒီတစ်ခါမှာတော့ Chinese movie ‘Once uponatime’ (2017) ကားလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ဒီကားလေးကတော့ romantic drama fantasy ကားအမျိုးအစားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားရဲ့သရုပ်ဆောင်တွေကတော့ပရိတ်သတ်တို့ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ Love O2Oထဲက Yang Yang နဲ့ Liu Yifei (ဂူးဂူး)တို့ကအဓိကဇာတ်ကောင်အနေနဲ့ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ ဒီကားလေးဟာဆိုရင် ‘Three lives, three worlds, Ten…
Supercop2( 1993 ) #unicode ဒီတစ်ခါတော့ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် 1993မှာထွက်ရှီခဲံတဲ့ HongKong Actionကား Supercop 2လေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Jackie Chan ရဲ့ Police Story Series ကို မှတ်မိကြဦးမှာပါ…. 1992 ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့တဲ့ Supercop 1 Police Story ထွက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Michelle…
1954 ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဗြိတိသျှ Animation ဇာတ်ကားဖြစ်တဲ့ Animal Farm ဆိုတဲ့ ကာတွန်းကားလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … ဒီဇာတ်ကားဟာ သာမန်သမရိုးကျကာတွန်းကားတွေကနေ ကွဲထွက်နေခဲ့ပါတယ် … ဒီကားကို CIA က ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီး စစ်အေးကာလအတွင်း ကွန်မြူနစ်ဆန့်ကျင်ရေးဝါဒဖြန့်တဲ့အနေနဲ့ ကူညီခဲ့တာပါ … ဇာတ်လမ်းအစအဆုံးကို Maurice Denham တစ်ယောက်တည်းကပဲ နောက်ခံအသံသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာလည်း ထူးခြားမှုတစ်ခုပါပဲ ……
#Zawgyi Eternal Loveထဲက မိုလ်န္​ခ​်န္​း​ရဲ႕ဇာတ္​ကား​အသစ္ေလးပါ ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္း ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ပရိတ္သတ္ႀကီးကို Chinese adventure comedy romance movie နဲ႕မိတ္ဆက္ေပးပါရေစ။ Movie name ‘Blow in the wind’ ‘Blow in the wind’ ဇာတ္ကားေလးကိုယခုနွစ္ ၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာစတင္ရိုက္ကူးခဲ႕ၿပီးစုစုေပါင္းအပိုင္း ၂၈ ပိုင္းပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကားေလးရဲ႕ဒါရိုက္တာနဲ႕ဇာတ္ညႊန္းေရးသူကေတာ့ Li…
70 m min
#zawgyi SBS ႐ုပ္သံလိုင္းကေန တနလၤာ အဂၤါေန႔ေတြမွာ ထုတ္လႊင့္ျပသေပးသြားမယ့္ VIP ဆိုတဲ့mystery,dramaေလးပါJang Na Ra,Lee Sang Yoon,Lee Chun Ah တို႔ အဓိက ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားပါတယ္ ေဆာင္းအြန္းကုန္တိုက္ VIP ေဖာက္သည္ေတြအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲေပးရတဲ့ဌာနက လက္ေထာက္ဒါရိုက္တာ နာေဂ်ာင္ဆြန္း အလုပ္ႀကိဳးစား စိတ္သေဘာထားေကာင္းၿပီး လက္ေအာက္ငယ္သားအေပၚမွာလည္း ကူညီ႐ိုင္းပင္းတတ္တဲ့သူ နာေဂ်ာင္ဆြန္းရဲ႕ေယာက္က်ာ္းကလည္းအဲ့ဒီဌာနရဲ႕ဒါ႐ိုက္တာ တစ္ေန႔က် နာေဂ်ာင္ဆြန္းဆီကို…
Go Go Squid! ( 2019 ) ******************************************************** #Zawgyi Yangzi, Li Xian, Hu YiTian တို႔ပါတဲ့ဇာတ္လမ္းတြဲအသစ္ကေလးပါ ဂ်ပန္သီခ်င္းေတြကိုCoverျပန္ဆိုေနတဲ့အသက္၁၉နွစ္အရြယ္ ITေက်ာင္းသူေလး ထုံညန္ ဆိုတဲ့ေကာင္မေလးနဲ႔ E-sports gameေတြမွာ legendတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့အျပင္ World’s Top Professional gamer တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေကာင္ေလး ဟန္ရွန္းယန္(Gun) K&K အဖြဲ႕ရဲ႕…
2018 ခုနှစ် June လထဲမှာ OCN ရုပ်သံလိုင်းမှ ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ Korea Crime , Fantasy , Drama , Science Fiction ဇာတ်လမ်းတွဲလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ … အခုခေတ်က စုံထောက်ခေတ်လို့တောင် ပြောလို့ရတယ်နော် … အသစ်ထွက်တဲ့ KDrama တိုင်းက စုံထောက်ကားကြီးပဲ … ဒီကားလေးကတော့ 2006…
ပြန်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် W – Two World ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် … ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ Main Actor အဖြစ်နဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော် Lee Jong-suk က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ Main Actress အနေနဲ့ကတော့ Han Hyo-joo က ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် … ဒီဇာတ်ကားဟာဖြင့် မထွက်ရှိသေခင်ကပင် Doctors…
Narnia ဆိုတဲ့ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ မှော်ကမ္ဘာလေးမှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်… Narnia ဇာတ်ကားတွေနဲ့အတူ ငယ်ဘဝက အမှတ်တရ ပုံရိပ်တွေဆီကို တခေါက်လောက် အလည်ပြန်သွားကြလိုက်ရအောင်… ငယ်ငယ်က Narnia ဇာတ်ကားများကို ကြည့်ပြီး ဗီရိုထဲ ဝင်လိုက်ရင် ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ မှော်ကမ္ဘာတစ်ခုကို ရောက်သွားမယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်ခဲ့ဖူးပါသလား? ထိုစိတ်ကူးနဲ့အတူ လက်တွေ့မှာရော အိမ်က ဗီရိုလေးထဲ ဝင်ကြည့်ခဲ့ဖူးပါလား? တော်တော်များများတော့ လူမှန်းမသိတတ်ခင် အရွယ်လောက်မှာ…
Doctor John 2019 တားျမစ္ထားတဲ့ေဆး၀ါးကို အသံုးျပဳလိုက္မိလို႔ ရာထူးခ်ခံရၿပီး အက်ဥ္းေထာင္ထဲေရာက္ေနတဲ့ ပါေမာကၡ ခ်ာယူဟန္ မေတာ္တဆမႈတစ္ခုမွာ လူနာရဲ႕အသက္ကိုမကယ္တင္လိုက္ႏိုင္လို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အျပစ္တင္ရင္း ေဆးပညာေလာကကို စိတ္ကုန္ေနတဲ့ ေမ့ေဆးပါရဂူ ေဒါက္တာကန္စီေယာင္း ဦးေလးရဲ႕ အကူညီေတာင္းခံမႈေၾကာင့္ ပါေမာကၡခ်ာယူဟန္ရွိေနတဲ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲမွာ အခ်ိန္ပိုင္းအျဖစ္ကူညီေပးဖို႔ ေဒါက္တာကန္စီေယာင္းေရာက္လာတဲ့အခါ အေရးေပၚအေျခေနမွာ လူနာရဲ႕အသက္ကိုကယ္တင္လိုက္တဲ့ သူတို႔ ႏွစ္ေယာက္ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘာေတြျဖစ္လာမွာလဲ ပါေမာကၡခ်ာယူဟန္ကေရာ…